"Waxaan tagaasida ugu tegayaa garoonka" - Damn
“Waxaan tagaasida ugu tegayaa garoonka” – Damn
By axadle	 On Jan 6, 2021
Taageeraha kooxda Arsenal Piers Morgan ayaa u soo bandhigay Mesut Ozil in uu taksi ka raaco garoonka diyaaradaha ka dib markii ciyaaryahanka khadka dhexe uu heshiis la gaaray kooxda Turkiga ka dhisan ee Fenerbahce.
Ozil ayaa laga reebay kooxda Arsenal xilli ciyaareedkan inkasta oo uu yahay xiddiga ugu mushaharka badan adduunka oo dhan 350 kun oo Gini todobaadkii, waxayna umuuqataa in 32 jirka uu ciyaaray kulankiisii ​​ugu dambeeyay ee kooxda markii qandaraaskiisu dhacayo xagaaga.
Wararka maanta ka imanaya dalka Turkiga ayaa sheegaya in Ozil uu heshiis saddex sano ah la gaadhay Fenerbahce kooxda Gunners oo bixin doonta mushaharkooda lixda bilood ee ugu horaysa halka Ozil uu heli doono 2.2 milyan oo heshiisiin ah.
Subax Wanaagsan Ingiriiska Piers Morgan, oo ah taageere Arsenal ah oo dhaliil u jeediya laacibka Jarmalka ah, ayaa soo dhoweeyay warka ka yimid Turkiga.
Hamigii horyaalka ee Man City ayaa si xun u dhacay
‘BOOM! Waxaan ugu dambeyntii heysanaa war wanaagsan 2021! “Morgan wuxuu u sheegay 7.7 milyan oo taageerayaal ah bartiisa Twitter-ka.
“Mesut Ozil Haddii aad rabto inaan ku geeyo garoonka diyaaradaha, ii sheeg.”
BOOM! Ugu dambeyntii war wanaagsan 2021! Haddii aad u baahan tahay kor u qaadid (ammaan leh) garoonka diyaaradaha @ MesutOzil1088, ii soo sheeg. https://t.co/ZNVsuBjYZa
– Piers Morgan (@piersmorgan) Janaayo 6, 2021
Mesut Ozil ayaa sidoo kale lala xiriirinayaa kooxda DC United iyo kooxdiisii ​​hore ee Schalke 04.
Sida layaabka leh ee noloshisa isu badashay
What Occurs to Your Physique When You Consume an Avocado